खबर छापाबाट || Rising Khabar
मंसीर ८ जलेश्वर । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मधेश आन्दोलनमा शहादत दिएका परिवारलाई ५०–५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । महोत्तरीको जलेश्वरमा पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा राजपाले मधेश आन्दोलनक सम्पूर्ण शहिदलाई प्रति परिवार ५०–५० लाख दिने घोषणा गरेको हो ...
काठमाडौ १७ कात्तिक । शक्तिशाली नेताहरू एक आपसमा भिड्ने भएकाले यी केही क्षेत्रहरू यसपालीको निर्वाचनमा चर्चामा रहेका छन्। यसलाई आजको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। झापा १ : विश्वप्रकाश शर्मा र सुरेन्द्र कार्की – झापा १ मा वाम गठबन्धनका सुरेन्द्र कार्की (राम ...
काठमाडौ १७ कात्तिक । नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश संरचनामा हुन लागेको पहिलो प्रदेशसभा चुनावमा शीर्ष नेताबीचको भिडन्त समेत भइरहेको छ, शीर्ष नेतालाई बागीको चुनौती समेत छ। यस चुनावमा देखिएका पाँच रोचक पक्षलाई आजको गोरखापत्रमा खबर छापिएको ...
काठमाडौ १७ कात्तिक । विहिबार ४५ जिल्लामा भएको विभिन्न मनोनयनमा हेभिवेट नेताविरुद्ध बागी उम्मेदवारी परेको छ। यो खबर हामीले नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध गोविन्दराज जोशी तनहुँ १ मा रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीले उम्मेदवारी दिएका छन् । ०४८, ५१ ...
काठमाडौ ११ कात्तिक । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै जिल्लामा प्रदेश र जिल्लास्तरीय पार्टी एकता संयोजन समिति तत्काल बनाउन विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । पार्टी एकता ...
काठमाडौ ११ कात्तिक । संसद् सकिएको साताभित्र रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने नियम ६२ सांसदले मात्र माने व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म ६२ सांसदले मात्रै रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेको संसद् सचिवालयस्थित ...
भक्तपुरमा बसभाडा मात्र १० रुपैयाँ
काठमाडौ ११ कात्तिक । भक्तपुर मिनिबस सेवा समितिले आफ्ना गाडीमार्फत भक्तपुरभित्र लोकल भाडा १० रुपैयाँ मात्रै लिने निर्णय कडाइसाथ लागू गर्ने भएको छ । समितिको निर्णयअनुसार धेरै गाडीका सहचालकले १० रुपैयाँभन्दा बढी गाडी भाडा असुलेपछि यात्रुले गुनासो गर्दै आएका थिए ...
बन्यो मतपत्र: निर्वाचन तयारी ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पूरा
काठमाडौ ११ कात्तिक ।आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि मतपत्र (समानुपातिक तर्फको) छपाइ सकिएको छ । प्रतक्ष्यतर्फको मतपत्र भने छाप्न सुरु गरिएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभाका १ सय ...
काठमाडौ ७ कार्तिक । मनोनयन दर्तासँगै जिल्लामा वयोवृद्ध तथा पञ्चायत पृष्ठभूमीका राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा र एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनका युवा उम्मेदवार शेरबहादुर तामाङबीच हुने रोचक भिडन्तबारे जिल्लामा अडकलबाजी सुरु भएका छन् ।आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ । १० ...
काठमाडौ ७ कार्तिक । प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना पार्टी कमिटीका सिफारिस लत्याउँदै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्न थालेका छन् । उम्मेदवार बन्न आफू निर्वाचन लड्न चाहेको क्षेत्र र जिल्ला पार्टीबाट अनिवार्य सिफारिस भई आउनुपर्ने गरी छनोट ...
तालमेलले महरा अन्योलमा: किन अटाएनन् रोल्पामा ?
काठमाडौ ७ कार्तिक । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा दाण् क्षेत्र नम्बर ३ मा विजयी भएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला दाङमा अडिएनन् । रोल्पालाई आफ्नो सुरक्षित थलोको रुपमा बुझेका उनी दोस्रो संविधानसभा मा रोल्पा १ बाट जिते ...
काठमाडौ ७ कार्तिक । सुन्दा अचम्म लाग्ला, विद्युत प्राधिकरणका लागि जडान गरिएका ट्रान्सफर्मरको सबैभन्दा ठूलो शत्रु अहिले मुसा बन्न थालेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा मुसाकै कारण एक दर्जनभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर जलेका छन्। यो खबर बुष्णु बेल्बासेले आजको नागरिक ...
काठमाडौ ७ कार्तिक । सरकारी कार्यालयमा कागजपत्रको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। सरकारी कर्मचारी र व्यक्तिको अभिलेख राख्ने सरकारी कार्यालय ती कागजपत्रका पोकाले भरिएका छन्। त्यस्ता कागजपत्र व्यवस्थित नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको मात्रै छैन, कार्यालयको आकर्षणसमेत हराएको छ। यो ...
काठमाडौ ७ कार्तिक । प्रमुख राजनीतिक दललाई आगामी मंसिर १० मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारीले सताउन थालेको छ। यसैबीच दलहरूले बागी उम्मेद्वार दिएकालाई कारबाहीको तयारी थालेका छन्। प्रमुख दलले आन्तरिक रूपमा बागी उम्मेदवारलाई सम्झाउने ...
काठमाडौ ७ कार्तिक । महिला त्यसमा पनि दलित। सुमित्रादेवी पासवानले म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन्छु भन्दा गाउँमा हँसिमजाक गर्ने धेरै भए। गाउँ डुलेर दिन कटाउने श्रीमान र तीन सन्तानकी आमा सुमित्रालाई गाउँलेले के भन्लान् भन्ने होइन, सन्तानको पालनपोषण कसरी गर्ने ...
काठमाडौ ७ कार्तिक । सरकारले पहिलो र दोस्रो वरीयताका सचिवलाई पाखा लगाउँदै तेस्रो वरीयताका सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ। यो खबर अर्जुन सुवेदीले आजको नागरिकमा लेखेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका शंकरप्रसाद अधिकारीलाई पन्छाउँदै ...
काठमाडौ ७ कार्तिक । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पस लामाचौरनजिकै नालीमा शनिबार राति मोटरसाइकलसहित खसेका १८ वर्षीय पिजन पुनको अत्तोपत्तो छैन। सँगै रहेका श्रवण पुनको घाइते अवस्थामा उपचार भइरहेको छ। यो खबर केशवशरण लामिछानेले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्। नदीपुरका पिजन मुसलधारे ...
काठमाडौ ७ कार्तिक । कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई दोस्रो चरणमा चुनावी तालमेल मिलाउनै सकस परेको छ। निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटको विषय पेचिलो बनेपछि दोस्रो चरणको चुनावी तालमेल हुने कि नहुने भन्नेमै अन्योल खडा भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। यो खबर कुलचन्द्र ...
काठमाडौ ७ कार्तिक । कुनै व्यक्ति लोकसेवाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर उच्च तहमा पुग्ने भनेको मुख्य सचिव वा मन्त्रालयको सचिव हो। तर, राजनीति गर्नेहरूले नै ती पदाधिकारीलाई चलाइरहेका हुन्छन्, र बेला बेला मन्त्री र सचिवबीच टकराव भइरहेको खबर बाहिर आइरहन्छन् । पछिल्लो समयमा ...
काठमाडौ ३१असोज । समानुपातिक सांसदका लागि हतारमा सूची बुझाएका दलहरूले अधिकांश नाम फेरबदल गर्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहित प्रायस् सबै दलले बुझाएको सूची ‘डमी’ मात्र भएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो खबर बालकृष्ण ...
काठमाडौ ३१असोज । एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धनले मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको छ ।गठबन्धन निर्माण कुनै पनि राजनीतिक शक्तिविरुद्ध परिलक्षित नभएको बताए पनि घोषणापत्रमा भने एमाले–माओवादीले सत्तारुढ कांग्रेसमाथि आरोपैआरोप लगाएका छन् । यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले ...
प्रदेशसभा सञ्चालन खर्च साढे दुई अर्ब रुपियाँ
काठमाडौ ३१असोज । काठमाडौ ३१असोज । सङ्घीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक गठन हुन लागेको प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च वार्षिक झन्डै तीन अर्ब रुपियाँ हुने भएको छ । यो खर्च भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाहेकको हो । एउटा प्रदेशसभा र सचिवालय सञ्चालनको खर्च भने वार्षिक ३६ ...
८८ किलो सुन भएको गाडी प्रहरीले नै चलाएर ल्याएका थिए!
काठमाडौ ३१असोज । दुई महिना अगाडि काठमाडौंमा बरामद भएको ८८ किलो सुन प्रहरीकै सहयोगमा भित्रिएको खुलेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले सुन बोकेको गाडी प्रहरीले नै चलाएर रसुवागढी भित्र्याएको बयान दिएका छन्। यो खबर नबराज मैनालीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका ...
८८ केजी सुन तस्करीमा संलग्न पनि कांग्रेसको उम्मेदवार
काठमाडौ ३१असोज । ८८ केसी सुन तस्करीको अभियोगमा नेपाल कांग्रेसका नेता तथा नेपाल चीन केरुङ ब्यापार संघका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङ पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले तामाङलाई स्वयम्भुबाट पक्राउ गरेको हो । उनी रसुवाबाट नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट आगामी संसद्का ...
काठमाडौ ३१असोज । एक दशकपछि विजयकुमार गच्छादार नेपाली कांग्रेसमा फर्केका छन् । २०६४ माघ १८ गते कांग्रेसबाट अलग भएस मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल हुँदै २०६६ सालदेखि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको नेतृत्व गर्दे आएका गच्छादारले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेससंग पार्टी एकता गरेका हुन् ...